स्वास्थ्य Archives - Page 170 of 180 - Purbeli News
बुढापाकाले भन्ने गरेको ‘घामपानीको शरीर’ कहिले काहीँ तलमाथि त परिरहन्छ । शरीरले आफूलाई सँधै स्वस्थ महसुस गर्दैन । कहिलेकाँही शरीर कमजोर र आलस्यको पोको बनिदिन्छ । शरीरमा कमजोरी भयो भने यी उपाय अपनाउनुहोस्ः १‍. दैनिक पालकको सागको एक गिलास जुस पिउँदा शरीरलाई ऊर्जा मिल्छ । २‍. एक गिलास दूधमा एक चम्चा मह र थोरै बेसार मिलाएर नियमित खाँदा कमजोरी हट्छ । ...
कलेजो रोग : लक्षण र उपचार
हाम्रो कलेजोमा जब बोसो जम्मा भएर जान्छ त्यो स्थितिलाई पैटी कलेजो (लिवर) भनिन्छ । यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ की, जसरी मोटोपन हुनाले हाम्रो शरीरको बाँकी भागमा बोसो बढ्छ । ठिक कलेजोद्वारा शरीरमा ब्लड सुगर, विसैलो तत्व र कोलेस्ट्रोलको स्तर नियमित हुन्छ । कलेजोले नै बोसोलाई पगालेर वाइलको स्राव गर्दछ तर धेरै बोसो थिग्रनको कारणले पैmटी लिवरको समस्या हुन्छ । ...
श्वासप्रश्वास एउटा अनियन्त्रित प्रक्रिया हो । श्वास फेर्न हामीलाई कुनै थप उर्जा खर्च गर्नुपर्दैन । तर, राम्रोसँग श्वासप्रश्वास लिएमा यसले स्वास्थ मात्र बनाउँदैन मानिसलाई दीर्घजीवि पनि बनाउँछ । बिहान ५ मिनेट जति लामो श्वास लिने छाड्ने गर्नुपर्छ । यसरी गरिने श्वासप्रश्वास व्यायायमका केही फाइदा यस प्रकार छन्ः तनाबमुक्त बनाउछः गहिरो श्वासले शरिरमा अक्...
दाँत तीन तहले बनेको हुन्छ । पहिलो तह दाँतको बाहिरी भाग जो हेर्दा सेतो देखिन्छ, मेडिकल भाषामा यसलाई इनामेल भन्छौं । दोस्रो तह इनामेलभन्दा भित्रको तह, जसलाई हामी ‘डेन्टिन’ भन्छौं । इनामेलको तुलनामा यो अलि कमजोर हुन्छ । र, तेस्रो तह भनेको सबैभन्दा भित्री भाग हो, जसलाई हामी ‘पल्प’ भन्छौँ । यो तहमा रक्तसञ्चार भइरहेको हुन्छ र यो सबैभन्दा कमजोर हुन्छ । हा...
भक्तपुर । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि सरकारले रु पाँच लाख सहयोग गर्ने तयारी गरेको बताउनुभएको छ । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा सञ्चालित भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको हालै निर्माण सम्पन्न स्मृति भवनको पहिलो र दोस्रो तलाको साँचो हस्तान्तरण कार्यक्रममा उहाँले क्यान्सरका बिरामीको सहज उपचार होस् भनेर सहयोग रकम थप गर्...
यसरी चिन्न सकिन्छ सेक्सी महिला
महिलाको व्यक्तित्वको बारेमा जान्ने इच्छा हरेक व्यक्तिमा हुने गर्दछ । त्यसमा पनि भन्ने गरिएको छ कि पूरुषहरुको दिमागमा हर हमेशा महिलाको बारेमा कुरा खेलिरहेको हुन्छ । आकृति विज्ञान एउटा यस्तो अध्ययन हो जसबाट महिलाको शरीरको अंङ्ग तथा चालढालबाट व्यक्तित्वको खोजीे गर्दछ । यहाँ हामीले पनि आँखा र नाकको बनावटबाट महिलाको व्यक्तित्व र स्वभाव कसरि जान्ने भन्ने...
यी हुन् चाया हटाने घरेलु उपाउ
– नरिवलको तेलमा कपुर मिलाएर कपालको जरासम्म पुग्नेगरी राम्रोसँग मसाज गर्ने । केही दिनमै चाया कम भएको महसुस हुनेछ । – तोरीको तेलले कपाल मसाज गर्ने । मसाज गरको आधा घण्टापछि तातो पानीमा तौलिया भिजाएर राम्रोसँग निचोरी टाउको बेर्ने । यसो गर्दा कपालको रोमछिद्र खुल्छ । यसो गरेको १५ मिनेटपछि कपाल धुने । – चुकन्दरको पातलाई पानीमा उमाल्ने र उमालेको पानीले क...
किन फर्फराउँछ आँखा ? यस्तो छ भ्रम र वास्तविकता
मानिसको आँखा फर्फराउनुलाई हाम्रो समाजमा शुभ तथा अशुभ संकेतको रूपमा मान्ने गरिन्छ । दैनिक जीवनमा आइपर्ने घटना हुनुलाई पनि कतिपय समयमा आँखा फर्फराउनुसँग जोडिने गरिन्छ । विशेषगरी, महिलाको दायाँ आँखा फर्फराउँदा अशुभ र बायाँ आँखा फर्पmरायो भने शुभ हुन्छ भन्ने जनविश्वास गरिन्छ । त्यस्तै, पुरुषको भने दायाँ आँखा फरफरायो भने शुभ र बायाँ आँखा फरफरायो भने अशु...
यी हुन् महिलाहरुले यौनसम्पर्क गर्नुअघि चाहने १० कुराहरु
यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यौन विज्ञको सहभागितामा ७०० ...
हत्केला शरिरको संवेदनशील अंगमध्ये एक हो । यो सबै भन्दा बढी प्रयोग वा उपयोगमा आउने अंग हो । त्यसैले हत्केला चिलायो भने यसले हाम्रो दैनिक गतिविधिलाई नै प्रभावित पार्छ । हत्केला चिलाउने समस्यालाई पैसा प्राप्त गर्ने वा गुम्ने परम्परागत मान्यतायसँग पनि जोडिएको पाइन्छ । हत्केला चिलाउनु पैसासँग कुनै साइनो छैन । हत्केला चिलाउनु रोग नभए पनि विभिन्न तत्वहको ...